Category: waa maxay guushu
Guushu waa maxay? Guushu waa himilo iyo hiigsi aad leedahay oo aad gaarto, mana aha mid ku timaada xaglo laaban, sahal, fikir gaabni, hami yari iyo samir yaraan toona.
Guushu waa helida dhamaan waxaad ka doonayso nolosha amase fulinta qorshihii aad hore u dajisatay, islamar ahaantaana guushu waa adoo kaca aroortii adoo dareemaya farxad oon aan dareemayn cidhiidhi iyo diiqad. Wax kabaro Astaamaha Guusha 1. Dajinta hami iyo hiigsi Isbadal jogto ah : dhaman dadka raba inay nolosha ka sameeyan Guul waxay naftooda ku qanciyaan inuu isbadal waajib yahay, waxay hoos iyo korba dadka uu codkoodu gaaro ugu sheegan in isbadal loo bahan yahay, waxaa mararka qaar dhacda in lagu arko qof qaldan balse waa wax noolasha ku caadiya, Nabi Muxamed CSWayaa tusale fiican kuugu ah, iyo dhamaan dadka noolasha horumarka ka sameeyey midkastood noolashiisa baarto.
Guulaha iyo wax soosaarka cusub ee manta la gaaray waa riyadii shalay. Haddii aad u fiirsato waxyaabaha kugu xeeran sida dhismayaasha dhaadheer, maraakiibta,diyaaradaha, telefonada ,internetka iyo idaacadahuba waxay shalay ahaayen riyo ku jirta maskaxda mid kamid ah dadkii daahfuray.
Riyadadu waa meesha ay ka bilaabanto guul kastaba waa waxa ugu muhiimsan ee wax qabadka. Mid xusuusnow riyadu xuduud malaha.
6 Waxyaabood oo Kaa Hortaagan Inaad Guulaysato.
Waxa kale oo Illahay aayado farabadan kaga hadlay samirka abaalkiisu in uu yahay jano iyo khayr. Marka aan ka hadleyno horumarka maadiga ahna waa inaad u samirto shaqada aad hayso ee aad ku hiigsanayso guusha aad rabtid.
Xaglo Laaban Guul laguma Gaaro Adu ha is xaqirin inta aanay dadka kale ku xaqirin, Isku kalsoonow oo niyadaada wanaaji Illaahayna talo saaro markasta. Ha u ogolaan dadka kale iney hoos kuu dhigaan.
Waxa hubaal ah in aad soo martay noloshaada guuldarooyin farobadan. Ma jiro qof wada wanaagsan qof waliba khalad wuu sameeyaa, hadaba ku dhiirigeli naftaada in aad tahay qof wax qabsan kara oona guulaysan kara.
HADAFKA HADUU KAA LUMO... ᴴᴰ┇ Sh. Mustafe Xaaji Ismaaciil
Guusha kuu imaan mayso ee adaa raadsanaaya. Waad guulaysan insha Allah In qofku baadho waxyaabaha uu u baahan yahay inuu sameeyo si uu u guulaysto iyo waxyaabaha ka hor istaagi kara guusha. Isku kalsoonow oo niyadada waanaji Illaahey talo saaro markasta. Ugu dambeyntii dadkani waxay sifo u leeyihiin Abaabulka iyo Adeegsiga awooda dadka kale, ama deegaanka ku xeeeran, waxay inta badan isku dayaan inay abuurtaan jawi la saaxiiba kaa soo ku gacansiiya marka ay hoos marto, sida Lataliyayaal daacad ah, iyo cidkastoo ay u arkaan inay gacan kasiineyso gaarida halka ay rabaan, waxaanay isku dayaan iney yareeyaan Cadawgooda wakhtiga bilawga.
Wax kabaro hababka looga hortago guul-daradda. Talo bixin. Noqo dadka markay Guusha gaaran, had iyo jeer Ilaahay u mahadnaqa oo ka dheeraadaa kibir iyo wixii lamid ahuna tafoxaydataa sidii aad guulo kale u gaari laheed. Waxa la isku raacay in guusha dhabta ah ee waaraysaa ay tahay guulaysashada if iyo aakhiroba iyo raali ahaanshaha Rabbi. Xaglo Laban Guul laguma Gadho!!! Waxa kaliya eed ubaahantahay inaad qabato si aad guul ugaadho waa inaad si sax ah u qabato waxa dadka guulaystay sameeyeen.
Maxaan u guulaysan waayay? Hadaad dhab u doonayso inaad guulaysto waa inaad si qotodheer ufahantaa fikradaha guud ee cayimaya fursadahaaga kaana dhigaya qof aan guulaysan. Fikradaha khiyaaliga ahi waxay si toos ah uxadidaan fursadahaaga dhabta ah iyo guushaadaba.
Ka takhalusida fikradahaas iyo inaad waxbadan ka ogaataa waa hawsha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad qabato haddii aad u jeelantahay guul. Fikradaha khiyaaliga ahi ma xadidayaan oo kaliya fursadahaaga balse waxay burburin karaan noloshaada.
Waa awooda layskugu dayo shay kale ama habkale hadii uu hab kuu shaqayn waayo.Somali - Motivational podcast - Waxaad halkan ka dhagaysan kartaa barnaamijyo ka hadlaya dhiirigalin, si wanaagsan u fikirka iyo ku nolooshaha nolol wax soosaar leh. Waa maxay guushu sideedaba? Waa maxay sababta ay qorshayaasha sannadka cusub u guuldaraystaan? Ma rabtaa in sannadkan aad ku guulaysto yoolkaaga iyo qorshaha aad dhigatay.
Ka dhagayso halkan 7 qodob oo arintan kaa caawin doona. Mustafe Baruud, waxa uu waraysiga kaga hadlayaa guusha, sida loo gaadho iyo waa maxay sababta dhalinyarada wadanka joogta ay waxbarashadii wadankooda ku barateen isla wadanka gudihiisi ay suuqa shaqada shaqo uga jari ladahay.
Mustafe sidookale waxa uu ka hadlayaa macadka uu asaasay ee cilmi baadhista iyo kordhinta awoodaha maskaxda aadamaha.
Dhagaysi wacan. Halkan ka dhagayso waraysigii na dhex maray oo xiiso badan. Somali Motivation Podcast. Waa 14 sanno jir ka soo tahriibay tuulo kutaala koonfurta Soomaliya. Ilmo yar ama qof dhalinyaro ah sidee ayay maskaxdiisu u qaadi kartaa isla markaana uga sheekayn kartaa dhibaatadaas soo martay oo samaysay fayoobantiisa iyo guud ahaanba noloshisa, dhagayso waraysigan. Somali Motivation podcast.
Loading Downloads. Follow Share. Category: Health:Self-Help. Home Home. Waa maxay Guushe? Sidee se loo gaadhi kartaa? Sannadka-cusub ku guuleyso Waa maxay sababta ay qorshayaasha sannadka cusub u guuldaraystaan? Mustafe Baruud: Gushaadu Gacantaada ayay ku jirtaa Mustafe Baruud, waxa uu waraysiga kaga hadlayaa guusha, sida loo gaadho iyo waa maxay sababta dhalinyarada wadanka joogta ay waxbarashadii wadankooda ku barateen isla wadanka gudihiisi ay suuqa shaqada shaqo uga jari ladahay.
Following MoreGuushu waa riyada ugu badan ee Qofka taas oo uu raadiyo qof kasta oo ah arday, shaqaale, agaasime, macalin, saynisyahano, dhakhtar, injineer, iyo garyaqaan, Arintaas la,aanteed Nolosha qofka ayaa noqta mid aan dhamaystirnayn sidoo kale macno la,aan ah.
Ilaa haatan lama helin qeexid ama jawaab sax ah oo lagu sheegi karo gusha Nolosha sababta oo ah waa arin koobsanaysa meelo badan oo Nolosha ah sidaas darteed waxa aan hoos kuugu soo bandhigi doonaa qaar ka mid ah qeexida guusha:.
Guusha ayaa ah Fariin qofka noloshiisa ah la,aanta arintaasna wax macno ah ma lahan, Illahay waxa uu qof walba u abuuray in uu guul ka gaadho nolosha adduunyo iyo mid Aakhiraba. Guusha Nolosha ayaa kaa caawinaysa in aad ka gudubto dareenka xun ee khatarta ku ahaa riyadaada mudadad dheer hadii aad hal mar dha-dhamiso guusha waxa aad gaadhaysaa halka ugu saraysa ee farxadaada.
Wadooyinka guusha Nolosha ayaa ah mid ah ka buuxaan caqabado iyo waliba dhibaatooyin hadii aad doonayso in aad guul ka gaadho nolosha waxa waajib ah in aad la dhaqanto kana gudubto caqabadahaas.
Waxa ugu horeeya ee ay tahay in aad samayso ayaa ah in aad qeexdo ujeedooyinkaaga aad doonayso in aad gaadho adiga oo meesha ku daraya xaqiiqada ah in u jeedooyinkaas inta aad ku jirto gaadhistiisa in ay kaa hor iman karaan caqabado, marka aad si cad u qeedo waxa aad doonayso aragtaada ayaa noqon doonta mid cad waxana aad bilaabi kartaa gaadhista u jeedkaaga. Marka aad go,aamiso u jeedkaaga bilow in aad diyaariso qorshahaaga, go,aami waxa aad gaadhi doonto maalitii, Todobaadkii, Bishii, shaqo walba u samee wakhti go,an kadib u qiimee una kala horaysii sida ay u kala muhiimsanyihiin, kee ayaa kuugu muhiimsan, kee ayaan kuugu muhiimsanayn kadib ku dhaqaaq fulinta.
Talaabadan ayaa ah in aad awoodaad saartoto horumarinta awooda shaqsi si aad u gaadho ujeedka aad doonayso waxana aad sidaas ku samayn kartaa samaynta tababar, waxbarasho, Akhrin buux talaabooyinkan ayaana kaa caawinaya in aad gaadho guusha. Isku day in aad meesha ka saarto fikirada xun ee ku dhex jira maskaxdaada arintaas waxba kaama caawinayso kuna badal u fikirka si fiican shaqada aad hayso adiga oo mar walba naftaada u sheegaya in aad qaban karto ama gaadhi karto u jeedkaaga. Waa iska caadi in aad dhawr mar ku fashilanto in aad gaadho u jeedkaaga oo ay caqabado kaa hor yimaadaan, xitaa Ragga maanta ugu lacagta badan uguna cilmiga badan ayaa soo fashilmay sidaas darteed waa in aad aqbasho fashilka kaa hor yimaada kana dhigo khibrad fiican si aad uga hor tagto fashilada mustaqbalka kana fogow in aad mar kale samayso khalad aad horay u samaysay.
Uma baahnid in aad wax ka dhagaysato qof ku fashilmay nolosha sababta oo ah wax faa,iido ah kama helaysid sidaas darteed isku day in aad la xidhiidho dadka aad garanayso ee guulaha ka gaadhay Nolosha taas oo kaa caawinaysa in aad hesho khabirad iyo faa,iido aad ku saxdo guushaada. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. La Sii Wadaag Asxaabtaada. Be the first to comment Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.Waa maxay guushu?.
Guusha waa helida dhamaan waxi aad rabte inaad haysato, waana ku guuleysiga hadafyadaadii iyo fulinta qorsha yaashadii. Waxa kali ah aad u bahantahay si aad guul u gaadhaa, waa inaa si sax ah u qabato waxa dadka guulaha gaaray ay sameeyeen.
Waxyaabaha Kaa Hortaagan Inaad Guulaysato. Hadii aad dhab ahaan u rabto inaad guul gaadho waa inaad faham fiican ka haysataa, waxyaabaha caqadaha kugu ah ee kaa dhigaya qof aan guuleysan. Dadka guulaha gaara waxay ka fogaadaan fikradahan wax yeelada badan leh, sidoo kale adna waa inaa ka fogataa. Fikradaha khiyaaliga ahi waa fikradaha aan saxda ahayn ee aad wax ka aaminto.
Tusaale ahaan fikradaha khiyaaliga ah adoo aamina inaad wadankaaga shaqo ka helayn. Waxaa laga yaaba inaad fikirkaas adiga uun iska dhaadhicise adigoon si adag iskugu dayin inaad shaqo hesho.
Mise aad ka maqasho saaxibadaa iyo dadka kuu dhaw, isla markaa nah aad aamintay. Noqo midka waxkasta isku daya oo tijaabiyo. Isbadalku waa sida aad sikale wax u qabaneyso ee aad iskugu dayeeyso.
Hadii uu habka mise dariiqa aad hada raacayso ku shaqayn waayo waa inaad iskudaydaa dariiqo ka duwan tan aad ku guul daraysate. Inta isbad badal aad yeelato waxa badanayso fursadaha aad guul ku gaarayso. Isku day inaad hab kale raacdo hadii uu mid kuu shaqayn waayo.
Hadii aadan lahayn qorsho yaal iyo hadafyo waxa qorsho yaashiisa kugu gaari doona qofkale oo hadaf leh. Hadii aadan waxba qorshaysan waxa meesha kaa saari doona kuwa qorshaystay. Waxaana sidookale ugu nuglaan dontaa inaad joojiso riyooyinkaga islamarka uu qof kuu sheego inaaney suurta gal ahayn. Hadii aad rabto inaad kordhiso fursadaha aad ku noqon karto qof guul gaara, waa inaad dhistaa kalsoonida naftaada. Waxaa jira Youtubaro iyo websaydho badan oo labo sano kayar jiray hadana dhawr kun oo dollar bishiiba soo saara.
Waxaa awoodaa inaad buug qorto kadib nah aad iibiso online dhaxdiisa. Hadii aad dhab ahaan u rabto inaad guul gaadho, waad gaari kartaa xataa adigoon haysan hanti iyo lacag faro qabsiinyo ah. Wadada guusha waxaa inta ugu badan ka buuxa diidmodareemo aad u xunshaqo adagniyad jab iyo waxyaaba badan oo ku hor istaagi doona inaad guusha gaarto balse markaad kaadho dhamaadkeeda waxaa dhab ahaan u dareemi dontaa farxad aad u badan oo ku ilaawsiisa halganka aad somarte.
Akhri 5 Talaabo oo aad ku gaadhi karto Hadafkaaga. Your email address will not be published. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Skip to content Waa maxay guushu?. Fikradaha Khiyaaliga Ah. Maxaa Kaaga Horeeya Wadada Guusha. Share this: Twitter Facebook.
Leave a Comment Cancel Reply Your email address will not be published.Post a Comment. Guushu waa shay qofkasta raadinayo, waa shayga aan dhamanteen ka midaysanay, waa waxa ka soo hor jeeda guul darada, waa shayga Alle wayna oo xume ka nasahaanye ugu baqay dhaman bani-aadamka isagoo sabab uga dhigay raacitanka Wadada uu jeexay, waa shayga ka shaykaynteedu fududay balse xaqiijinteedu aaad u dhibadantay, waa dhufsane yaraha ka dhaxeeya Adamaha dhamaanti, waana waxa qofkastoo inaga midi subax kasta ugu kalaho qabashada shaqo cayiman, tasu aminsan yahay inay waxun ku kordhinayso meshu ku socodo ha yarado ama ha bate.
Waji Furnan iyo Niyad Wanagogow guriga waxa laga gal albabka, qofkana wajiga, Guushadu waxay ku xidhantay kolba sidad uga faa'idaysato deeganka kugu xeran, deganka kugu xerana waxa ugu muhimsan dadka kula nool, dadkana waxa lagu kasbada waji furnan iyo niyad saman.
Geesinimo iyo Dhiirananguul iyo dariiq fog wa matano, dariiq fog iyo hagardamoyina wa is huran yihiin, qofkasto raba inu gadho mel fog wa inu awoda inu dadka ku qanciyo halku ku socdo iyo inuu si taxadar le ugu babac dhiga waxkasto isku daya inu ka hor istago himiladas.
Samir iyo Xiiso galin: ha ilabin Samra sadkii hela, Ogow waxa samir lagu helo orad laguma hele, ha ilabin guusha ma gaadho qof niyad jab badani, ama dadka niyad jabiya, wa inad barada sida naftada lo dhiiri galiyo dadkana loogu dhiri galiyo waxa fican. Tilmaamsi iyo Hogansanansho : qofkasta wuxu u bahan yahay cidi ku daydo, wa inad hesha cid gadhay waxad rabto si ad ugu dayato una racdo wayo aragnimadisi, dhanka kalena wa inad noqota qof ku tagan wuxu go'aansado, labaclabacnimadu wa dariiqa guul darada ha ilabin!
No comments:. Newer Post Older Post Home. Subscribe to: Post Comments Atom.Waa awooda layskugu dayo shay kale ama habkale hadii uu hab kuu shaqayn waayo. Isbadalkaaga oo bata waxaa badanaya laqabsashada aad la qabsanayso xaaladaha kala duwan taasi oo badinaysa fursadahaaga guusha.
Hadii aanay kuu qorshaysnayn inaad noqoto hogaamiyaha tiimka ama kooxda aad wada shaqaysaan qof kale oo kamida kooxdiina ayaa qorshaysan doona sidoo kale hadii aanay kuu qorshaysnayn inaad ku dadaasho shaqada mushaharka sare leh ogow in qof qorshaystay uu kaa buuxin doono. Wuxuu kaa buuxin doonaa booskaa mushaharka sare leh, lacagta badana isagaa qaadan doona, isaga ayaana caan noqon doona halka aad ka noqon doonto daawade.
Waxa kaliya eed ubaahantahay inaad qabato si aad guul ugaadho waa inaad si sax ah u qabato waxa dadka guulaystay sameeyeen. Maxaan u guulaysan waayay? Hadaad dhab u doonayso inaad guulaysto waa inaad si qotodheer ufahantaa fikradaha guud ee cayimaya fursadahaaga kaana dhigaya qof aan guulaysan.
Dadka guulaystaa waxay ka fogaadaan fikradahaan curyaamiyay dad badan sidoo kale waa inaad adna ka fogaataa: Fikradaha khiyaaliga ah: Fikradaha khiyaaliga ahi waa fikradaha aan saxda ahay eed naftaada ama wax ka aaminsantahay.
Fikradaha khiyaaliga ahi waxay si toos ah uxadidaan fursadahaaga dhabta ah iyo guushaadaba. Ka takhalusida fikradahaas iyo inaad waxbadan ka ogaataa waa hawsha ugu muhiimsan ee ay tahay inaad qabato haddii aad u jeelantahay guul. Fikradaha khiyaaliga ahi ma xadidayaan oo kaliya fursadahaaga balse waxay burburin karaan noloshaada.Mustaqbal wanaagsan inaynu yeelano awgeed waa tan aan u dadaalno dhamaanteen, ee aan wax u barano.
Mustaqbalka wanaagsan waa kan xambaarsan guul, ee uu qofku gaarayo hadaf uu hiigsaneyey noloshiisa. Guushuna waa shayga Alle wayne Isagaa xume ka nasahane uu ugu baaqay dhammaan bani-aadamka, isagoo sabab uga dhigay raacitaanka waddada uu jeexay. Waa shayga ka sheekayntiisu fududdahay, balse xaqiijinteedu ay aad u dhib badan tahay.
Waa dhufsane-yaraha ka dhaxeeya aadamaha dhammaantii, waana waxa qofkastoo inaga mid ah subax kasta ugu kallaho waxbarashada ama shaqo cayiman oo uu aaminsan yahay inay wax uun ku kordhinayso meeshu ku socdo mustaqbalkiisa. Haddaba mustaqbalkan wanaagsani waa maxay? Yaa ku guuleysta inuu gaaro mustaqbal wanaagsan oo guul leh?.
Markaynu ka hadlayno nolosha iyo halgankeeda, inagoo ku xisaabtamayna dhammaan dadka ku nool adduunka nooc kasta oo ay yihiin iyo waxkasta oo ay aaminsan yihiin, mustaqbalka loo wada ordayaa waa in guul laga gaaro adduunka, taas oo noqon karta in uu yeesho qofku maal iyo hanti. Sidoo kale, in uu yeesho aqoon ama uu nolol sare helo. Balse, Muslim ahaan waxaan qirsanahay in guusha iyo mustaqbalka dhabta ah ay yihiin kuwa aakhiro.
Ilaahay dariiqiisuna uu yahay kan kaliya ee haga liibaanta adduun iyo tan aakhiro. Hase ahaatee, marka ay timaado liibaanta adduunyo ma jiro hab la oranayo 1, 2 iyo 3 oo Quraan ku yirri raaca, balse waxa la hoos dhigay qof kasta iyo xikmadiisa nololeed, waana sirta nolosha.
Anaga oo mabda ka dhiganeyna Quraanka iyo sunnada, tusaalena u qaadaneyna dad badan oo ku liibaanay dariiqyo kalla duwan, sida, kuwo naftooda ku waayey dagaal, balse ku helay wax aanay ilna arag, dhegna maqal, qalbi bina adana kuso dhicin oo janno ah. Halka kuwo 99 qof, qudha ka jaraynaya ay ka mid noqdaan dadka nolosha ku guulaystay ee helay mustaqbal wanaagsan. Markaynu dib u eegno taariikhda ka hartay asxaabtii Rasuulka SCW iyo dadkii liibaanay, waxaynu garan karnaa dariiqii ay mareen ee ay ku gaareen mustaqbal wanaagsan aduun iyo aakhiroba.
Mustaqbalka wanaagsan iyo guushu ma ahan wax cilmi-baaris lagu sheegay ama wax sida culuumta qaar la tijabiyey oo lagu najaxay waxaan ull jeedaa sidda loo guulaysto, balse waa wax ninba meel la maray.
Taasina, waa tan u sababta ah in dad yar oo koobani ay nasiib u yeeshan in ay mustaqbal wanaagsan sameeyaan, halka dadka intooda badanina kooxdaa yar ay ka sheekeeyaan. Haddaba, si aad u gaarto mustaqbal wanaagsan oo aad guulo badan ugu soo hoyso noloshaada, waxaa lagama maarmaan ah inaad kaga dayato dadkii horey u liibaaney oo aad qaado wadadii ay u mareen dariiqooda guusha, taasoo haddii la is yidhaahdo raaca ay suuro gal tahay in la gaaro mustaqbal lagu qanci karo.
Waxaana la isku raacay arrimo dhawr ah inay sabab u noqdaan in qofku guulaysto oo uu helo mustaqbal wanaagsan, kuwaas oo qofkii tallaabooyinkan raacaa uu gaaro guusha. Inkasta oo qof kasta duruuf u gaar ah ay jirto, haddana waxa la arkaa in uu gaaro halka uu u socdo.
Haddaba, adiga oo ka duulaya in mustaqbalku uu bilowdo maanta ee aanu ahayn berri, waxaa laysla gartay in qofka raaca tallaabooyinkani uu yahay mid guul gaaray. Your email address will not be published. Bukhaari Xirsi FaaraxApril 8, Qalabka Neefsiga ee Hawo siinta Ventilation? Ilhaan Ciise MaxamedApril 12, Maxamuud Axmed MuuseApril 12, Aqoontu Maxay Soomaalidu u Bedeli Waysay? Axmed Yuusuf XassanApril 11,
rjm supercharger 370z
siemens training calendar 2019 india